Izindaba - Izitayela Ezinhlanu Njengamanje Ezishayela Imakethe Yokuhlanza Amanzi
Imikhuba Emihlanu Okwamanje Ishayela Imakethe Yokuhlanza Amanzi
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe yiWater Quality Association luveze ukuthi amaphesenti angama-30 amakhasimende asezinsizeni zamanzi ahlala akhathazekile ngezinga lamanzi ageleza avela kompompi bawo. Lokhu kungasiza ekuchazeni ukuthi kungani abathengi baseMelika bachitha ngaphezulu kwama- $ 16 billion emanzini asemabhodleleni ngonyaka odlule, nokuthi kungani imakethe yokuhlanza amanzi iqhubeka nokukhula okumangazayo futhi kulindeleke ukuthi ikhiqize ama- $ 45.3 billion ngonyaka ka-2022 njengoba izinkampani ezikulesi sikhathi zilwela ukuhlangabezana nezidingo zabathengi.
Kodwa-ke, ukukhathazeka ngekhwalithi yamanzi akusona ukuphela kwesizathu sokukhula kwale makethe. Emhlabeni wonke, sibone izitayela ezinhlanu ezinkulu zithatha umusi, konke esikholelwa ukuthi kuzoba nomthelela ekuqhubekeni kwemakethe nokwanda okuqhubekayo.
1. Amaphrofayili Omkhiqizo Omncane
Kuyo yonke i-Asia, ukwanda kwamanani empahla nokukhula kokufuduka kwabantu basemaphandleni kuya emadolobheni kuphoqa abantu ukuthi bahlale ezindaweni ezincane. Ngesikhala esiphansi nesitoreji semishini, abathengi bafuna imikhiqizo engeke nje yonge isikhala kepha isize ukuqeda imfuhlumfuhlu. Imakethe yokuhlanza amanzi ibhekana nalesi simo ngokuthuthukisa imikhiqizo emincane enamaphrofayili amancane. Isibonelo, uCoway usungule umugqa womkhiqizo we-MyHANDSPAN, ofaka phakathi izinto zokuhlanza ezingabanzi ngaphezu kwesandla sakho. Njengoba isikhala esiphikisayo esingeziwe singabhekwa njengokuthatheka, kunengqondo ukuthi iBosch Thermotechnology yathuthukisa izindawo zokuhlanza amanzi ezihlala eBosch AQ, ezenzelwe ukulingana ngaphansi kwekhawunta nokungabonakali.
Akunakwenzeka ukuthi amafulethi ase-Asia azokhula noma nini maduzane, ngakho-ke okwamanje, abaphathi bemikhiqizo kumele baqhubeke nokulwela isikhala esithe xaxa emakhishini abathengi ngokuklama izinto zokuhlanza amanzi ezincane nezincane.
2. Ukwenza kabusha amaminerali okunambitha nempilo
Amanzi ane-alkaline ne-pH alinganiselwe abe ngumkhuba okhulayo embonini yamanzi asemabhodleleni, futhi manje, abahlanza amanzi bazifunela isiqeshana semakethe. Okuqinisa imbangela yabo yisidingo esikhulayo semikhiqizo nezimpahla esikhungweni sempilo, lapho imikhiqizo kulo lonke imboni ye-Consumer Packaged Goods (CPG) ifuna ukungena kuma-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-30 aseMelika achitha “izindlela zezempilo ezihambisanayo.” Enye inkampani, iMitte®, ithengisa isistimu yamanzi asekhaya ehlakaniphile edlula ukuhlanzwa ngokukhulisa amanzi ngokwenza kabusha amaminerali. Iphuzu layo lokuthengisa elihlukile? Amanzi kaMitte awahlanzekile kuphela, kepha anempilo.
Vele, ezempilo akuyona ukuphela kwesici esishayela umkhuba wokuvuselelwa kabusha kwamaminerali. Ukunambitha amanzi, ikakhulukazi amanzi asemabhodleleni, kuyisihloko esiphikiswana kakhulu, futhi ukulandelela amaminerali manje kubhekwa njengengxenye ebalulekile yokunambitha. Eqinisweni, i-BWT, ngobuchwepheshe bayo obunelungelo lobunikazi be-magnesium, ibuyisela i-magnesium emanzini ngesikhathi senqubo yokuhlunga ukuqinisekisa ukunambitheka okungcono. Lokhu akusebenzi kuphela emanzini okuphuza amsulwa kepha kusiza ukuthuthukisa ukunambitheka kwezinye iziphuzo ezifana nekhofi, i-espresso netiye.
3. Isidingo Esikhulayo Sokubulala Amagciwane
Abantu abalinganiselwa ezigidigidini ezi-2.1 emhlabeni jikelele abanakho ukufinyelela kwamanzi aphephile, okuyizigidi ezingama-289 abahlala e-Asia Pacific. Imithombo eminingi yamanzi e-Asia ingcoliswe imfucumfucu yezimboni neyasemadolobheni, okusho ukuthi amathuba okuhlangana namabhaktheriya e-E. Coli namanye amagciwane aphuma emanzini aphezulu kakhulu. Ngakho-ke, abahlinzeki bokuhlanzwa kwamanzi kufanele bagcine ukucabanga kwamanzi okuphezulu, futhi sibona izilinganiso zokuhlanza eziphambuka esigabeni se-NSF A / B futhi zishintshele kuzilinganiso ezibuyekeziwe ezinjenge-3-log E. coli. Lokhu kunikeza ukuvikelwa okuqhubekayo okwamukelekayo kwezinhlelo zamanzi okuphuza kepha kungafezwa izindleko ezengeziwe ngempumelelo futhi ngosayizi omncane kunamazinga aphezulu okukhipha amagciwane.
4. Ukuzwela Kwekhwalithi Yamanzi Yesikhathi Sangempela
Umkhuba ovelayo wokwanda kwamadivayisi wasekhaya smart yisihlungi samanzi esixhunyiwe. Ngokunikeza idatha eqhubekayo kuzingxenyekazi zohlelo lokusebenza, izihlungi zamanzi ezixhunyiwe zingenza imisebenzi ehlukahlukene kusuka ekuqapheni ikhwalithi yamanzi ukukhombisa abathengi ukusetshenziswa kwawo kwansuku zonke kwamanzi. Le mishini izoqhubeka nokuhlakanipha futhi ibe namandla okukhula ukusuka ezindaweni zokuhlala kuye kumasipala. Isibonelo, ukuba nezinzwa kulo lonke uhlelo lwamanzi lukamasipala bekungagcini ngokuxwayisa izikhulu ngokushesha mayelana nokungcola, kepha futhi kungaqapha amazinga wamanzi ngokunembe kakhudlwana futhi kuqinisekise ukuthi imiphakathi yonke iyawathola amanzi aphephile.
5. Kugcine kukhanya
Uma ungezwanga ngeLaCroix, kungenzeka ukuthi uhlala ngaphansi kwedwala. Futhi i-craze ezungeze lo mkhiqizo, abanye abayibize ngokuthi ihlelo, ineminye imikhiqizo efana ne-PepsiCo efuna ukusizakala. Abahlanzayo bamanzi, njengoba beqhubeka nokwamukela izitayela ezikhona emakethe yamanzi asemabhodleleni, bathathe ukubhejela namanzi aqubukayo. Isibonelo esisodwa isihlanzisi samanzi esikhanyayo sikaCoway. Abathengi bakhombise ukuzimisela kwabo ukukhokhela amanzi asezingeni eliphakeme, futhi abahlanza amanzi bafuna ukufanisa lokho kuzimisela nemikhiqizo emisha eqinisekisa ukuthi ikhwalithi yamanzi nokuhambisana kwayo nezinto ezithandwa ngabathengi.
Lezi yizinto eziyisihlanu kuphela esizibonayo emakethe njengamanje, kepha njengoba umhlaba uqhubeka nokushintshela empilweni enempilo futhi nesidingo samanzi okuphuza amsulwa sikhuphuka, imakethe yabahlanzisi bamanzi nayo izokhula, ilethe izinhlobo ezahlukahlukene izitayela ezintsha sizoqiniseka ukuthi sigcina amehlo ethu ethe njo.